Qatar Airways na-eweghachite A380s ya maka oge oyi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Qatar Airways na-eweghachite A380s ya maka oge oyi
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa ozi Qatar • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Qatar Airways na-eweghachite A380 ya maka oge oyi.
Mwedata ụgbọ elu 19 Airbus A350 na nso nso a site n'aka onye na-ahụ maka ihe n'ihi okwu na-aga n'ihu metụtara mbelata elu elu n'okpuru agba ebutela mkpebi siri ike ịlaghachi A380 n'ọrụ.
Mmụba na-aga n'ihu n'ọchịchọ ndị njem na ikike ụgbọ elu gafee netwọkụ ụwa na-atụ anya n'oge oyi 2021.
Qatar Airways na-eme mkpebi ịnabata ụgbọ mmiri A380 azụ azụ n'ihi ụkọ ikike na-aga n'ihu.
A Ụgbọ elu Qatars Airbus A380 weere na mbara igwe maka oge mbụ n'ime ihe karịrị ọnwa 18 na mbụ n'izu a, na-etinye ụgbọ elu si Doha International Airport (DIA) gaa Hamad International Airport (HIA) mgbe ụgbọ elu ahụ kwụsịrị ime mkpebi ịnabata ụgbọ mmiri ahụ laghachi azụ. arụ ọrụ n'ihi ụkọ ikike na-aga n'ihu.
A na-atụ anya na ọ dịkarịa ala ise n'ime 10 ụgbọ elu ahụ Airbus A ga-eweghachi ụgbọ elu A380 na ọrụ nwa oge n'ime izu ndị na-abịa iji kwado ikike ụgbọ mmiri n'okporo ụzọ oyi, gụnyere London Heathrow (LHR) na Paris (CDG), site na 15 Disemba 2021.
Onye na-ebu ụgbọ ala maka steeti Qatar na-eche oke oke ihu ugbu a maka ikike ụgbọ mmiri ya n'ihi nkwụsị nke 19 nke ya na nso nso a. Airbus Ụgbọ mmiri A350 n'ihi ọnọdụ mmebi elu dị ngwa ngwa na-emetụta elu ụgbọ elu dị n'okpuru agba, dị ka Qatar Civil Aviation Authority (QCAA) nyere iwu.
Ụgbọ elu ahụ ewebataghachikwara ọtụtụ n'ime ya n'oge na-adịbeghị anya Airbus Fọdụ ụgbọ mmiri A330 na-esochi mmụba na-aga n'ihu na ikike ikike n'ihi ịdị mfe nke mgbochi njem na oge ezumike oyi na-abịa, nke a na-atụ anya ịhụ nlọghachi na ọkwa pre-COVID.
Qatar Airways Onye isi ndị isi otu, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, kwuru, sị: "Mgbadata ụgbọ mmiri 19 Qatar Airways A350 na nso nso a ahapụla anyị enweghị ụzọ ọzọ ma ọ bụghị iji weghachite ụfọdụ ụgbọ mmiri A380 anyị ruo nwa oge n'okporo ụzọ oyi.
"Ihe mgbakwasị ụkwụ ndị a bụ n'ihi okwu na-aga n'ihu metụtara mmebi ngwa ngwa nke fuselage elu dị n'okpuru agba, nke ka bụ ihe a na-edozibeghị n'etiti. Qatar Airways na onye rụpụtara ihe kpatara ya ka amabeghị.